P. Pogba kii ka weynaa F. Pogba oo ku biiray koox ka dhisan Horyaalka kubadda cagta Mareykanka – Gool FM
(Manchester) 03 Feb 2019. Laacibka kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xulka Faransiiska Paul Pogba ayaa boggiisa Instagram ku shaaciyay sawirka walaalkiis ka weyn Florentin Pogba oo uu sheegay in uu heshiis la galay kooxda Atlanta United oo difaacanaysa Horyaalka MLS ee Mareykanka.
Inkastoo kooxda Atlanta aysan si rasmi ah u shaacin la soo wareegidda daafacan u ciyaarayay kooxda Gençlerbirliği ee Turkiga oo uu tan iyo bishii Janaayo 2018 u ciyaarayay, waxaana waqti xaadirkan uu ahaa mid heshiiskiisu dhammaaday oo baadi goobayay koox la wareegta.
Florentin Pogba oo 28 jir ah ayaa waxa u u soo saftay kooxaha Sedan iyo Saint-Etienne ee Faransiiska.
Wararka ayaa intaa ku daraya in ku dhawaaqidda Atlanta ee heshiiska F. Pogba ay ka dhiman yihiin warqado yar, waxaana Florentin uu u duulay Mareykanka, si uu ugu biiro xerada tababarka Atlanta halkaas oo ciyaartoyda naadigu ku tababaranayaan.
Proud to finally sign @florentinpogbaofficial to #AtlantaUnited #MLS 👊🏼⚽️ #Pogba #EAagency thanks to @legacysportmanagement !
A post shared by Jerome Meary (@jeromemeary) on Feb 2, 2019 at 1:18pm PST
ARAG: Wixii ay sameeyeen Japan kaddib markii uu Xulka Qatar ka qaaday Asian Cup.....(Talaabo ku dayasho mudan)